Wednesday March 25, 2020 - 20:50:39 in Wararka by
(Rating 4.3/5 Stars) Total Votes: 6
Shirweyne looga arinsanayay Jihaadka ka socda bariga Africa oo ay kasoo qeybgaleen in ka badan 100 xubnood oo isugu jira culimo, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo hogaanka sare ee Xarakada Al-Shabaab Al Mujaahidiin ayaa soo gabagaboobay, kaas gunaa
Shirweyne looga arinsanayay Jihaadka ka socda bariga Africa oo ay kasoo qeybgaleen in ka badan 100 xubnood oo isugu jira culimo, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo hogaanka sare ee Xarakada Al-Shabaab Al Mujaahidiin ayaa soo gabagaboobay, kaas gunaanadkii laga soo saaray fatwo sharci ah iyo bayaan lagu faah-faahinayey qodobadii kasoo baxay shirka.
Shirka oo socday muddo shan maalin ah laguna qabtay hool si heer sare ah loo qurxiyay ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas'uuliyiiin fara badan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada Muslimiinta ah ee Soomaaliyeed iyo madax ka socotay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo isugu jira Ansaar iyo Muhaajiriin.
Gorfeeyn iyo talo uruurin dheer ka dib Culimada ku dhaqan wilaayaatka Islaamiga oo kamid ahaa dhinacyadii kaqeyb galay shirka ayaa fatwo sharci ah kasoo saaray ilaa shan qodob oo kala ahaa arimihii laga dooday, kuwaas oo kala ah: Xukunka Dustuurka ay ku dhaqanto DF, Doorashooyinka dimuquraadiga ee la doonayo inay ka qabsoonto wadanka iska celinta cadowga qabsaday wadanka, cowlamada bariga Afrika iyo sharciyada xukuumada Farmaajo.
Fatwada kasoo baxday culimada oo ka koobneyd ilaa 16 bog kuna saxiixan yihiin ilaa 40 sheekh oo kamid ah culumada Diinta Islaamka ee sida weyn looga yaqaano dalka Soomaaliya ayaa lagu caddeeyey in ay xaaraan tahay ka qeybgalka doorashooyinka dimuquraadiga, ku dhaqanka dastuurka DF, iyo cowlamada bariga Africa, gaar ahaan arinta ku saabsan in Soomaaliya lagu biiriyo Itoobiya inteeda kale.
Culimada ayaa sidoo kale fatwadooda ku cadeeyey in xukuumada shisheeyuhu ka dhisay Soomaaliya ee ay tahay mid gaalo ah oo ka baxday diinta Islaamka, ayna waajib tahay in lala dagaalamo, halka sidoo kalena ay cadeeyeen in dagaalka kasocda Soomaaliya uu yahay mid dafci ah oo ay waajib tahay in qof waliba uu naf iyo maalba ku bixiyo si looga adkaado gumeystaha duullaanka ah.
Sheekh Jaamac Cabdi Salaam oo kamid ah culimada ugu caansan Soomaaliya ayaa madasha ka akhriyey fatwada, taas oo mid mid loogu faah-faahiyey qodobada shanta ah iyo adilada loo cuskaday.
Bayaan barbar socday fatwada oo lagu faah-faahinayey qodobadii la isla meeldhigay ayaa sidoo kale laga soo saaray kulanka, kaas oo ka koobnaa ilaa 14 qodob, waxaana bayaanka goobta ka akhriyey gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Soomaliyeed, Nabadoon Ibraahiة (Shaacirul Islaam).
Halka akhri bayaanka oo Afsoomaali ah PDF
Halkaan Ka Akhriso bayaanka oo Carabi ah PDF
Bayaanka oo luqada English-ka ku turjuman halkan ka akhri
Halkan ka dhageyso Fatwada culimada MP3
Halkan ka dhageyso Bayaanka culimada MP3
Melleteriga Itoobiya oo duullaan ballaaran ku qaaday gobolka Tigray.